Nguva yekuverenga: 4 maminitsi(Last Updated On: 29/01/2020)
Nokuda pakukurumidza uye zvimunakire Zvinokosha kuti Winter Train Travel muItaly, unogona kushanyira vose munyika pamusoro dzakasiyana nokukurumidza uye zvakanaka. Heano kumusoro maguta mashanu kuenda nechitima muItaly ichi chando.
Winter muna Venice kunoreva wakachena, Crisp mhepo uye vashoma mapoka kuti kutsausa imi kubva runako kwayo. Vane Gondola kukwira kana sveta kofi panguva yaiungana. Pane nguva mukana chiedza rakanaya chando kuti wako Venice ruzivo kunyanya mashiripiti.
Kutenga tikiti ari munhu pachiteshi anogara nezvechisarudzo. zvisinei, kugadzirira mitsetse refu uye kuzvuzvungudza uye yepamusoro mitengo. In nhasi uye zera, zvakanyorwa kuva ndozvakajairwa kuchengetera yenyu chitima zvigaro paIndaneti. Kana totaura sei kure pachine unogona kutenga matikiti dzenyu, mhinduro achaenderana mhando Italian chitima.
Frecce nezvitima ndivo soro-nokukurumidza nezvitima kuti run pakati maguta makuru Italy raMwari. Unogona kutenga matikiti wako mangwanani sezvo mwedzi mina pamberi penyu pakufamba musi. Recently, Trenitalia yakazivisa kuti kwaizowedzera yayo Réservation jengachenga kuti 6 mwedzi mberi.